မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကောင်မလေးကို ပိုးကြမယ်....
It's not that difficult if you can type your keyboard without looking at it.. I tried. not bad. Thanks for good game.
yes.. at first i think it would be easy. but these key are not commonly used as in order for words. As for me i always confuse W and E, S and D, J and H if too many comes. Actually it'sachildplay game but i enjoy playing childplay game. :) Now i am at the normal game 2nd song.
ဗေဒါရေ..အရမ်းကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါ။ မွန်းကတော့ normal alevel, Titanic song အထိပဲရတယ်။ ၄ပုဒ်မြောက်လား သိပါဘူး။ easy level ကတော့ အားလုံးပြီးပါတယ်ရှင်။ ဒီလို ဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးကို ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။